/blog/tadalafil/Zụrụ elu dị ọcha Tadalafil ntụ ntụ online: Ihe niile ị kwesịrị ịma !!!
Ihe na 03 / 06 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na tadalafil. O nwere 6 Comments.
Tadalafil ntụ ntụ blog igodo
1.Tadalafil ntụ ntụ 2.Tadalafil uzuzu maka ire ere
3.How kedu ọrụ tadalafil? 4.Ilee tadalafil uzuzu ka o were?
5.Howụ ka ị ga-esi nweta raw tadalafil ntụ ntụ? 6. Ngwa Tadalafil uzuzu maka ire ere
7.Otu esi mee ka cialias na ulo (Maka amaokwu) 8.Tadalafil ntụ ntụ VS Sildenafil uzuzu
9.Results nke tadalafil ntụ ntụ 10.Tadalafil ntụ ntụ nyochaa
11.Ebe ịchọta onye na-azụta ihe ntanetị nke tadalafil. 12.Howụ ka ịzụta tadalafil ntụ ntụ online?
13.Howụ ka ịzụta raw tadalafil ntụ ntụ si AASraw?
I. (Cialis ntụ ntụ) Raw tadalafil uzuzu isi Ihe:
1.Tadalafil ntụ ntụ
Tadalafil uzuzu, raw material of tadalafil, bụ ụdị ọcha ntụ ntụ, na-emekarị ọ na-eji na-eme tadalafil mkpụrụ ọgwụ. ọgwụ Tadalafil, nke a na-akpọ / Cialis, bụ otu n'ime ọgwụ ndị a maara dị ka PDE-5 (Nyocha Phosphodiesterase type 5). Mmezi nke nwoke na nwanyiTadalafil / Cialis na-agbanye uru nke ọbara ọbara na-eme ka ọbara na-asọba n'akụkụ ụfọdụ nke ahụ. Tadalafil / Cialis na ndị ọzọ PDE-5 inhibitors nwere ike inyere ndị ikom aka na-arụ ọrụ (ED) site n'ịkwalite mmepụta erectile mgbe nwoke na-akpali agụụ mmekọahụ.Ọ na-eji agwọ ọrịa na-adịghị mma (nkwarụ) na ihe mgbaàmà nke ọbara ọbara prostatic benign (prostate gbasaa) . Ndị mmadụ na-azụkarị ụcha uzuzu site na akwa dị ọcha tadalafil ntụ ntụ soplaya.N'otu site na Tadalafil / Cialis, ọgwụ ndị ọzọ na klas a bụ Viagra (Sildenafil) na Levitra (Vardenafil) na Flibanserin.
2.Tadalafil uzuzu maka ire ere
Tadalafil uzuzu, ihe nke Tadalafil / Cialis, ụdị White ntụ ntụ, ọtụtụ mmekọahụ hormore ngwaahịa soplaya na-azụta akwa dị ọcha Tadalafil ntụ ntụ ntanetị, tinye ya n'ụdị ụdị ọ bụla Tadalafil / Cialis, nkọwa zuru ezu nke Tadalafil / Cialis raw dị n'okpuru:
Ụdị Mkpụrụ: C22H19N3O4
Molekụla arọ: 389.4
Agba: White Powder
3.How kedu ọrụ tadalafil?
Ọ dị mma, ugbu a na anyị maara ntakịrị ihe gbasara tadalafil, gịnị mere anyị anaghị anwa ịghọta ihe mmetụta ya kpatara? Na paragraf ndị dị n'elu, anyị kwuru na Tadalafil bụ onye mmechi PDE5 - ma gịnị kpọmkwem ka nke ahụ pụtara? Ka anyị lebakwuo anya na onwu nke dị n'azụ ike nke ọgwụ a.
Mgbe ị na-ewere 36-hour Cialis / tadalafil uzuzu, ọ na-ebelata mmetụta nke PDE5 na usoro gị ngwa ngwa, na-eme ka ịta cGMP laghachi na ọkwa nkịtị dị ka mkpirikpi oge 15-45. Otú ọ dị, dịka ọkara nke ndụ Tadalafil dị mkpụmkpụ, mmetụta ya na-aga n'ihu n'oge 2 na-eme ka PDE5 laghachi azụ na ahụike gị - na-aka njọ. Kama nke ahụ, ọ bụrụ na ị na-eme ka ike Cialis / tadalafil siri ike kwa ụbọchị, ọ na-enyere aka ịnọgide na-enwe ogo ahụike nke cGMP n'ime ahụ gị, na-enye gị ohere nke ichere anya ogologo oge iji nwee mmekọahụ ọzọ. Ọ na-ewe oge Cialis 4-5 dị ala iji malite ịrụ ọrụ, ya mere, atụla anya na ị ga-abanye ezigbo azụ mgbe ị natachara mpi mbụ ahụ. Otú ọ dị, akụkụ dị mma bụ na ị gaghị enweta nsogbu ọ bụla n'ihe ndina ọzọ - ọ bụrụhaala na ị na-ewere Cialis / tadalafil kwa ụbọchị.
4.Ilee tadalafil uzuzu ka o were?
N'ozuzu, teepu tadalafil bụ ọgwụ ọjọọ. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị tụlee ihe ndị ọzọ ị na - eji ya na mmetụta ndị nwere ike ịme nwere ike ịkpata. Dịka ọmụmaatụ, mmanya na tadalafil nwere ike imekọrịta. Ịṅụ oké mmanya pụrụ iduga ná nsogbu ụfọdụ dị oké njọ. Otú ọ dị, n'ịdị na-edozi ahụ, ịṅụ mmanya pụrụ ịbụ na ọ gaghị akpata nsogbu. Nke a bụ ihe ị ga-amata iji nyere gị aka ịnọ jụụ mgbe ị na-ewere tadalafil Raw ntụ ntụ.
Inwe otu iko mmanya ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ọ bụla nwere ike imetụta tadalafil ntụ ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ ihe ize ndụ ahụ ike. Ma ọ bụrụ na ị na-ewere tadalafil Raw ntụ ntụ na-aṅụbiga ókè ókè, ị nwere ike ịme onwe gị maka nsogbu ụfọdụ. N'ikpeazụ, ịṅụbiga mmanya ókè mgbe ị na-ewere tadalafil Raw ntụ ntụ nwere ike iduga ụbụrụ ịchọrọ. Nke a nwere ike ime ka isi awọ, dizziness, na nkụda mmụọ, nke nwere ike ịkpata ọnyá ma ọ bụ mmerụ ndị ọzọ. Hypotension nwekwara ike ime ka obi gị iti ogologo. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke a nwere ike ibute nsogbu obi siri ike.
Mmetụta a nwere ike ime n'ihi na tadalafil ntụ na mmanya na-eme ihe dị ka vasodilators. Vasodilators bụ ihe ndị na-ebelata ọbara mgbali gị site na ịkwado mgbidi nke arịa ọbara gị, nke na-ekwe ka oghere ọbara meghee.
Nkwupụta ụbụrụ nke ụbụrụ na-enwe ike ọbụna yikarịrị ka ọ ga-ejide ya na tudalafil Raw ntụ ntụ karịa ụfọdụ ọgwụ ndị ọzọ na-adịghị mma. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na tadalafil uzuzu na-adị n'ime usoro gị karịa oge ndị ọzọ ED.
5.Howụ ka ị ga-esi nweta raw tadalafil ntụ ntụ?
Raw tadalafil uzuzu na-abata n'ahịa na ụdị ọgwụ tadalafil, capsules, Mgbe ị kpebiri iji tadalafil, yuou ga-edozi dose dịka mkpa gị.
Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ụtụtụ tadalafil a tụrụ aro bụ 10 mg kwa ụbọchị, na-ewerekarị 30minutes tupu oge mmemme (tadalafil maka ojiji). Dabere na nzaghachi nke nzaghachi ma ọ bụ mmetụta ndị dị na ya, a pụrụ ịgbatị dose ahụ na 20 mg ma ọ bụ belata na 5 mg n'ụbọchị. Mmetụta nke tadalafil nwere ike ịdịru ruo 36 awa. Ndị ọ bụla na-aṅụ ọgwụ ndị na-eme ka ọkwa ọbara nke tadalafil ghara ibufe ngụkọta nke 10 mg na 72 awa (Lee mmekọrịta ọgwụ ọjọọ). Maka otu ojiji a na-eji kwa ụbọchị n'emeghị ka inwe mmekọahụ bụrụ ihe a tụrụ aro bụ 2.5 gaa na 5 mg kwa ụbọchị. Tadalafil ekwesịghị iwere ihe karịrị otu ugboro kwa ụbọchị.
Mgbe ị were ya, Debe ọgwụ a n'ime akpa ya, na-emechi emechi, nakwa site na ụmụaka. Na-echekwa ya na ime ụlọ okpomọkụ ma pụọ ​​na okpomọkụ na mmiri (ọ bụghị n'ime ime ụlọ ịwụ).
Ngwa 6.Tadalafil uzuzu maka ire ere
Maka anyị, mgbe ụfọdụ iji nwee mmetụta dị ike ma ọ bụ mmetụta na-adịghị ike, anyị nwere ike ime ka kọfị kọfị site n'ịgbakwụnye mmekọahụ na-eme ka ntụsị na-acha uhie uhie, dịka mkpa nke onye ahịa si dị iche iche kaadị kọfị. Nke ahụ pụtara, tadalafil Raw ntụ ntụ nwere ike inye aka mee ka ọ bụrụ kọfị.
Tadalafil uzuzu maka Mmekọahụ mmanya / ihe ọṅụṅụ
Enwere ike itinye ya na nlekọta ahụ ike. Mmanya onwe ya amụbawo mmetụta nke ọbara, a ghọtara na anyị nwere mmanya ọbara ọbara na-eme ka ọ dịkwuo ike ịbawanye ọbara maka ụmụ nwanyị, n'ihi na ụmụ nwoke na-eme ka ụbụrụ testosterone dị n'ọbara, ma mmetụta nke mmanya ahụ dị nro. Na mgbakwunye nke ntụ ntụ na ntụ ntụ nwere ike gbanwee na ego a chọrọ, na ihe ọṅụṅụ ahụike na-ewu ewu karịa ndị ikom na ahịa, karịsịa ndị okenye.
7.Otu esi mee ka cialias na ulo (Maka amaokwu)
1) 2 Glass "Obere Obere" Mkpụrụ mmanya na-egbu egbu (50mL ọ bụla).
2) 2g raw tadalafil powder (cialis powder for sale), nwere ike ịzụta raw tadalafil uzuzu maka ire ere site na raw tadalafil Ezuzu uzuzu uzuzu, ma jide n'aka na raw raw tadalafil bu akwa elu, obughi ihe obula.
3) "Ọka mmiri ọgwụ", nke bụ nanị pipette / dropper na akara akara ndị na-egosi gị ego ole dị na ya.
4) obere obere vidiyo / karama / akpa. M na-eche na iko kacha dịrị nchebe na nke a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa tadalafil ruo ogologo oge.
1) Nye 2G nke raw tadalafil ntụ ntụ (cialis ntụ ntụ maka ire ere) si SZOB
2) Zụrụ obere ọgwụ / pipette na-agwọ ọrịa na mpaghara ọgwụ gị
3) Gaa n'ụlọ ahịa mmanya gị ma zụta 2 ntakịrị mmanya mmanya 50mL. Dịka ọmụmaatụ Ketel 1 vodka.
4) Ghichaa vidiyo / akpa ma ọ bụ jide n'aka na ọ dịtụghị.
5) Wunye otu mmanya mmanya n'ime iko mmanya.
6) Tinye ALL raw tadalafil uzuzu n'ime iko vidiyo. Ị nwere ike iji nkoo ma ọ bụrụ na vial nwere ọnụ zuru oke, ị nwere ike wụnye ya na baggie.
7) Wunye mmanya ọzọ mmanya na-aba n'ime iko mmanya.
8) Tinye okpu azụ na vidiyo iko ma kpochie ya.
9) Ikwanye ike tupu ị na-ewepụ ọgwụ.
Iji dịrị nchebe, ị nwere ike ịmalite na ọkara nke dose. Mara anya na ị ga-ama jijiji n'ihu ọ bụla dose.
8.Tadalafil ntụ ntụ VS Sildenafil uzuzu
N'ahịa, e nwere oriri abụọ na-ewu ewu nke na-eme ka ọgwụ sie ike: tadalafil Raw ntụ ntụ na sildenafil uzuzu, nke a na-ejikarị eme ihe maka mmetụta siri ike ha na ọnụma mpi.
Ma ihe mere azy tadalafil Raw powder supplier choose Tadalafil dị ka na-ere ahịa mmekọahụ ịzụ ọgwụ na ihe onwunwe. Nke ahụ na-ekwu, ihe mere tadalafil uzuzu dị mma karịa Sildenafil uzuzu.Let maara ya.In ndị na-esonụ, anyị na-akpọ Cialis na Viagra.
Ọrụ Cialis dị ngwa karịa Viagra
tadalafil Azu uzuzu uzuzu ọ bụ ezie na ha abụọ nwere ngwa ngwa ngwa ngwa, Tadalafil na-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa Viagra. Ọ bụ ezie na Viagra na-ejikarị oge 20-30, Cialis nwere ike ịrụ ọrụ na minit 15-20. Cialis dịkwa dị ka Cialis Daily, nke a na-ewere otu ugboro n'ụbọchị, ma ga - enyere gị aka ịmepụta ụlọ n'oge ọ bụla n'ụbọchị.
Cialis dị ogologo karịa Viagra
Cialis nwere oge dị ogologo karịa Viagra, ọ pụkwara ịnọ n'ime ahụ ruo oge 36. Nke a emeela ka a mara aha ya bụ "Mkpịsị izu izu". Nke a na-abara gị uru n'ihi na ịkwesighi ịkọwa usoro ọgwụgwọ gị dị ka ihe ọ bụla a na-atụ anya na ị ga-enwe mmekọahụ, kama ọ nwere ike iji mmetụta ya ruo 12, na mgbe ụfọdụ 36 awa mgbe ọ nwụchara.
Cialis enwere mmetụta dị ole na ole karịa Viagra
Ka ọgwụ ndị ahụ na-arụ n'otu ụzọ ahụ, ha na-ekerịta ọtụtụ ụdị mmetụta ahụ. Ndị a na-agụnye ihu ọchị, isi ọwụwa na mgbu. Otú ọ dị, Viagra nwekwara mmetụta ndị ọzọ na-adịghị ka ọ na-emetụta ndị ọrụ nke Cialis ruo n'ókè ahụ, dị ka ihe ọkụ ọkụ, nsogbu ahụhụ na afọ ọsịsa. Isi ọwụwa na-emekarị site na Viagra, ma ọ ga-adị ogologo oge na Cialis. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ndị a emetụta gị mgbe ị na-eji Viagra, Cialis nwere ike ịhọrọ nhọrọ ka mma.
Jiri obere Cialis jiri ya tụnyere Viagra?
Cialis nwere ike iburu na ihe dị mkpa, ma ọ bụ kwa ụbọchị.Generally, dosages kwa ụbọchị dị ntakịrị karịa ụdị doses.8 dị mkpa. A na-ewere Cialis dịka ntinye 10mg amalite, tupu ịmalite mmekọahụ. Mmetụta nke Cialis ga-adịgide na 36 awa. Enwere ike ịgbatị usoro ahụ na 20mg ma ọ bụrụ na 10mg adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ belata na 5mg ma ọ bụrụ na mmetụta ndị dị na ya enweghị ike ịdaba.
A na-ewegharị Viagra na ihe dị mkpa, na ọgwụ 50mg, ihe dịka 1 hour tupu oge mmemme (ọ bụ ezie na a ga-ewepụ ya na 30 nkeji ruo 4 awa gara aga). A pụrụ itinye ụdị ahụ na 100mg ma ọ bụrụ na 50mg adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ belata na 25mg ma ọ bụrụ na mmetụta ndị dị na ya apụghị ịdị irè.Viagra ga-ewere otu ugboro n'ụbọchị ma ọ bụ ezie na mmetụta na-apụ n'anya mgbe oge 4-5 gasịrị. Mmetụta kachasị mkpa bụ isi ọwụwa, njigide ma na-agwụ ike .Ma, enwere ike ịgbanwere nghọta Viagra. Mmetụta dị n'akụkụ a anaghị eme Cialis.
Ọ bụ ezie na anyị na-eme nchọpụta nchịkọta nke uzuzu nke Raw, anyị nyochaa Intanet, dị mkpa forums, mgbe anyị na-agbalị itinye "tadalafil Raw ntụ ntụ" na google, anyị nwere okwu ndị dị ka "tadalafil ntụ ntụ", "tadalafil ntụ ntụ", "tadalafil ntụ ntụ reddit "," Tadalafil powder china "... Ma nweta ozi gbasara tadalafil na mba dị iche iche na ihe sitere n'aka ndị ọrụ, anyị na-eleta ụfọdụ ndị ahịa anyị, nweta ụfọdụ ozi, tadalafil Nchọpụta uzuzu ntụ ọka:
Ebe ị ga-azụta tadalafil Raw ntụ ntụ Tadalfil uzuzu nyocha ngwa ngwa na-egosi na ọtụtụ ndị na-echebara banyere ajụjụ ahụ, ee, ụfọdụ ndị na-ahọrọ ịzụta tadalafil ntụ ntụ, ụfọdụ na-ahọrọ ịzụta tadalafil Ahọrọ ntụ china, ụfọdụ na-ahọrọ tadalafil ntụ ntụ, ụfọdụ na-ahọrọ tadalafil ntụ ntụ India. O siri ike ikwu onye kachasị mma, mee ka onye ọ bụla nwee arịrịọ dị iche. Ma, ị nwere ike were ya dịka ọmụmaatụ: tadalafil Raw ntụ ntụ na USA bụ nke dị oke ọnụ, tafalafil ntụ ntụ na India, ị na-adị mfe ịzụta ihe adịgboroja. Omenala dị na Canada na-esi ike ịfe. Na-atụkọ ọnụ, tadalafil Raw powder supplier in China seems better, price, purity, ma biko cheta, ọ bụrụhaala na ị zụtaa tadalafil Rawpowder online, ị bụ ihe yiri nke ahụ ịzụta adịgboroja.So biko kpachara anya.
10.Tadalafil ntụ ntụ nyochaa
Mgbe ị na-ekpebi ịzụta tadalafil Raw ntụ ntụ, ị ga-amatakwu ihe ndị ọzọ chere banyere ya, maka ntụle, ebe a bụ ụfọdụ nyocha nke tadalafil ntụpụ site na AAS, ọ na-egosi:
Nyochaa 1 / 23 / 2018
M na achọ mkpụrụ ọgwụ tadalafil maka inwe mmekọahụ na ọnwa gara aga, ebe Tadalafil 20mg na tadalafil 10mg dị na ụlọ ahịa dị n'ógbè dị oke ọnụ, ahọrọ m ịzụta tadalafil ntụ ntụ online.N'ọchọchara na Google, pinterest, achọtara m AAS raw company.I jụrụ Onye Ahịa Ọrụ ahụ ọnụahịa, na ụfọdụ nkọwa dịka tadalafil vs viagra, tadalafil dosage, tadalafil mmetụta mmetụta ogologo oge, mgbe nlele ọzọ tadalafil reviews, M nyere iwu 10g.
Enwere m 10mg tadalafil ntụ ntụ na 10pm Anaghị m achọpụta ihe ọ bụla ruo mgbe m tetara n'abalị na banyere 1am na ụlọ nrụgide siri ike. Mmekọahụ dị nnọọ mfe ma rụọ ọrụ ahụ! Nanị akụkụ dị mma bụ isi nro dị arọ n'oge abalị, ma, tadalafil vs sildenafil, mmetụta dị nro dị nwayọọ nke na anaghị m achọ paracetamol ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
Nyochaa 2 / 02 / 2018
Tadalafil VS viagra, Viagra anaghị arụ ọrụ nke ọma maka m, achọkwara m isi awọ, m wee gbanwee Tadalafil.Buy raw tadalafil ntụ ntụ na AAS, ahụmahụ dị ukwuu.
11.Ebe ịchọta onye na-azụta ihe ntanetị nke tadalafil.
Maka ọtụtụ tadalafil Raw powder user, ịchọta a pụrụ ịdabere na tadalafil Ezuzu uzuzu ntanetị yiri ka ọ bụ nsogbu, ee, ọ ga-abụ nke ọma. Site na nyocha tadalafil ntụ ntụ, achọpụtara m ụzọ dị iche iche ndị ọrụ na-ekere òkè, enwere m nchịkọta.During theroid of finding a pụrụ ịdabere na Tadalafil ntụ ntụ soplaya, ebe a bụ ọtụtụ ụzọ.
Nke mbụ, gbalịa chọọ 20 tadalafil uzuzu ntanetị na google, ma gbalịa ịmatakwu nkọwa ụfọdụ, mana maka ịjụ ihe.
Nke abụọ, M ga-agbalị kacha mma ịchọ na google, youtube, pinterest, na ụfọdụ forums dị mkpa, dị ka tadalafil Raw ntụ ntụ reddit. ihe mere na m na - adabere na nke a? Ebe ọ bụ na ha na - arụ ọrụ na ntụpọ, ha ga - eme ka ọnụnọ ha chee na ndị mmadụ na - amonye .Ma ịhụ bụ beliving, vidio, foto na blọọgụ ... .Ha bụ ihe dị ike.
Ekem site na ikwurịta okwu na ọrụ ha na-eri ego ma lelee mkparịta ụka ntanetị nke Tudalafil nke ụlọ ọrụ ha, họrọ ịkwado ya.
12.Howụ ka ịzụta tadalafil ntụ ntụ online?
Mgbe ị na-atụle ma ọ bụ kpebie ịzụta Raw tadalafil ntụ ntụ site na tadalafil uzuzu snoo, ị ga-eche echiche banyere ajụjụ ole na ole dịka: ụdị ụdị ọcha ị chọrọ gbasara tadalafil Raw ntụ, maka ndị mmadụ na-eji ma ọ bụ anụmanụ, na ọnọdụ ndị dị na ya ọgwụ klas maka mmadu nwere ike ịbụ 99% nke dị ọcha, ọ nwere ike dị ntakịrị ọnụ, ma ọ bara uru maka iji ya. Ọ dịkwa mkpa ka ị chee banyere ego ị nwere ike ịnabata. N'ahịa ahụ, ụgwọ nke 99% ọcha tadalafil uzuzu dị gburugburu 650USD / 1kg, mana maka nnwere onwe, mee ka anyị niile mara na ọnụahịa ahụ dabere na oke na quality.Besides, mgbe ị na-ahọrọ tadalafil Raw powder supplier na-arụkọ ọrụ ọnụ, ịkwesịrị ị na-eche banyere ụfọdụ ihe dị ka, ịzụta tadalafil Raw ntụ ntụ ? tadalafila arw ntụ ntụ china? kedu ụdị usoro ị ga-esi na-ebufe, ị ga - ahọrọ, ma ha nwere iwu nke nnweta, ihe ha ga - eme ma omenala ha jidere gị, ka ha ga - edozi nsogbu ụfọdụ maka gị? Ọrụ ha dị mma? ọ bụrụ na ha nwere ahụmahụ, na ihe ndị ọzọ ... Tadalafil nchịkọta ihe nchịkọta anụcha n'etiti ihe ndị a, maka ọtụtụ tadalafil raw anụ zụrụ, ha na-elekọta ihe banyere àgwà ahụ, n'ihi na akwa dị ọcha tadalafil raw ntụ nwere ike ịmepụta ọgwụ ndị ọzọ tadalafil. mee ka a mara aha ọma.
Mgbe ị tụlechara ihe ndị a nile, họta ngwa ngwa tadalafil raw chara na-arụkọ ọrụ ọnụ.
13.Howụ ka ịzụta raw si AASraw?
Tadalafil uzuzu maka ire ere: Otu esi choputa tadalafil uzuzu?
Kedu ihe ị pụtara, aghọtaghị m. Kedu ka anyị ga-esi kpọtụrụ e-mail? My email bụ king@aasraw.com